Martida Makrafoonka, 13 May 2019 page 1
Martida Makrafoonka: Cabdiraxmaan Cabdishakuur
Barnaamijka Martida iyo Makrafoonka waxaa marti inoogu ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah madaxa xisbiga Wadajir.
Martida Makrafoonka: Cabdirashid Ducaale
Barnaamijka Martida Makarafoonka waxaa todobaadkaan marti ku ah maamulaha shirkadda xawaaladda Dahabshil, Cabdirashid Ducaale.
Martida: Cabdisalaan Yuusuf Guuleed
Bar. Martida Makarafoonka iyo Siciid Dani
Barnaamijka Martida Makarafoonka waxaan toddobaadkan ku marti ah, Siciid Cabdullaahi Dani, oo ahaa wasiirkii hore ee Qorsheynta & Iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya oo ka hadlaya waxyaabihii ka soo baxay shirkii Brussels.
Barnaamijka Martida Mikrofoonka ee toddobaadkan waxaa marti ku ah Cabdirashiid Cali Shucaac oo ah madaxa Hay'adda Rajo Community Rights oo u dhaqdhaqaaqda xuquuqda Soomaalida Ethiopia